Dowladda Soomaaliya iya Dowladda Qadar ayaa isku raacay in la dar-dar geliyo Iskaashiga Labada dal.
Ra'iisal Wasaaraha iyo wefdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray Dhuusamareeb
(Doha, Qatar, March,04, )Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa maanta la kulmay Amiirka Qadar Amiir Hamad bin Khalifah Al Thani. Madaxweynaha safarkiisa ayaa muhiimadiisu tahay iskaashi guud oo dhan walba ah oo dhex mara Soomaaliya iyo Qadar.
Madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay Amiirka sida sharafta leh ee uu usoo dhaweeyay wafdiga Soomaaliya. Sidoo kale Madaxeynaha ayaa ku aamanay Amiirka Qadar horumarka ay ka gaartay xagga Dhismaha iyo Wax barashadda oo hogaankiisa wanaagsan ku timid.
“Iskaashi heer sare iyo in wadajir labadda dal ay u shaqeeyaan waa muhiim waana lama huraan” ayuu yiri Madaxweyne Xassan. Labada masuul iyo wasiirada labadda dal ayaa ka hadlay qaabkii Soomaaliya loo kabi lahaa xagga dhaqaalaha iyo in deynta Soomaaliya lagu leeyahay wax looga qabto si Soomaaliya ay uga mid noqoto hay’adaha Caalamiga Maaliyadda.
Mar uu ka hadlay “Lixda Tiir Siyaasadeed” Madaxweynuhu wuxuu yiri “Isbedel iyo Rajo Wanaag ayaa Soomaaliya ka jira, maalgelin yarna saameyn weyn ayey keeneysaa.”
Ugu danbeyntii labada masuul ayaa isku raacay dhamaan arimihii laga wada hadlay.
Dhusamareeb, March 04,2013----Ra'iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo wefdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayna ka mid yihiin guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Mudane Jeylaani Nuur Iikar, Wasiirada Arrimaha Gudaha, Gaashaandhiga, Wasiir kuxigeeno, Xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa gaaray degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
Ra'iisal Wasaaraha ayaa waxaa garoonka Dhuusamareeb si weyn ugu soo dhoweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada degmada, sida, maamulka dowladda, mas'uuliyiinta Ahlusunna Waljamaaca, iyo dadweyne fara badan kuwaas oo lulayay caleemo qoyan.
Ra'iisal Wasaaraha ayaa waxaa uu u gudbay xarunta degmada halkaasoo ay ku sugnaayeen kumanaan dadweyne ah oo ka kala yimid qeybaha uu ka kooban yahay gobolka Galgaduud, waxayna dadkani wateen boorar iyo sawirada Ra'iisal Wasaaraha.
Ra'iisal Wasaaraha oo la hadlay dadweynaha ayaa uga mahadceliyay soo dhoweynta ballaaran ee ay u sameeyeen, wuxuuna xusay in degmada Dhuusamareeb ay tahay degmadii uu ku dhashay ayna muhiimad gaar ah u leedahay booqashadiisan.
Sidoo kale, Ra'iisal Wasaaruhu waxa uu u mahadceliyay maamulka Ahlusunna Waljamaacah sida ay isaga difaaceen kooxaha nabad diidka ah oo uu sheegay inay marar badan isku dayeen inay xoog kula wareegaan degmada balse ay u babac dhigeen xoogaga Ahlusunnah, wuxuuna sidoo kale u mahadceliyay maamulka dowladda ee gobolka iyo degmada.
Ra'iisal Wasaaraha ayaa mar uu ka hadlayay isbedelka magaalada waxa uu xusay in degmada ay ka muuqato dib u dhac ayna ka muuqdaan raadadkii dagaalada, isaga oo u balan qaaday in xukuumadu u howlgali doonto sidii looga taageeri lahaa dhinacyada waxbarashada iyo adeeg bulshada.
Ra'iisal Wasaaraha ayaa sidoo kale xusay in booqashadan ay jawaab u tahay booqasho ay mas'uuliyiinta Ahlusunnah ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho markaas oo uu balan qaaday inuu booqasho ku tegi doono Dhuusamareeb. waxaana inta uu joogo Ra'iisal Wasaaruhu kulamo la qaadan doonaa qeybaha kala duwan ee bulshada, sida odayaasha dhaqanka, waxgaradka, siyaasiyiinta, dhalinyarada, haweenka isaga oo kormeero ku sameyn doona qeybaha taariikhiga ah ee degmada.
Faafin: SomaliTalk.com | March 5, 2013